မူဆယ်မြို့တွင် တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ယခုအခါ ဒေသခံများ ပုံမှန်အတိုင်း သွားလာရေ - Yangon Media Group
မူဆယ်၊ မေ ၁၃
ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)မူဆယ်မြို့မှ နှစ်နိုင်ငံ ဝင်ထွက်ပေါက် မန်ဝိန်းဂိတ်အနီးရှိ ပန်ခမ်းတံတားရဲကင်းကို မေ ၁၂ ရက် နံနက် ၅ နာရီခန့် TNLA နှင့် KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပေါ်ပြီး နောက် မေ ၁၃ ရက်တွင် မူဆယ်မြို့၌ ပုံမှန်ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုများရှိနေပြီး မြို့လုံခြုံရေးကို စနစ် တကျပိုမိုလုပ်ဆောင်ထားကြောင်း သိရသည်။
”တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံဝင်ထွက်ဂိတ်တွေကို မနေ့က မွန်းလွဲ ၂ နာရီလောက်ကတည်းက ပြန်လည်ဖွင့်ပေးနေတာ ကြောင့် ကုန်ကားတွေနဲ့ခရီးသည် တွေ ပုံမှန်ဝင်ထွက်မှုပြုနေပါပြီ။ ကားဂိတ်တွေလည်း ပုံမှန်သွားလာ နေလျက်ပါပဲ။ မြို့ပေါ်မှာလည်း မနေ့ကတည်းက ဆိုင်တချို့သာ ပိတ်ထားခဲ့ပြီး ညဘက်ညဈေးလည်း ရောင်းပါတယ်။ ဒီမနက် ဈေးလည်း ရောင်းပါတယ်။ ငွေလွှဲလုပ်ကိုင်တဲ့သူတွေလည်း ပုံမှန်ငွေ လွှဲလုပ်ငန်းကို လုပ်နေပါတယ်။ ဒီမှာကတော့ စိုးရိမ်စရာမရှိတော့ပါဘူး”ဟု မူဆယ်မြို့ခံ ကိုဝင်းလွင်က ပြောကြားသည်။ ယခုအခါ မူဆယ်မြို့၌ တပ်မတော်သားများ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ပြည်သူ့စစ်များပူးပေါင်း၍ အချိန်ပြည့်လှည့်ကင်းများလှည့်လည်၍ လုံခြုံ ရေးများဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
”ကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးကြိုး ပေါက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဘက်မှာက သိတဲ့အတိုင်းပဲလေ။ နယ်မြေဒေသပထဝီအနေအထားအရ သူတို့က အင်အားနည်းတဲ့ဘက်ကို သာလွန်အင်အားနဲ့အလစ်ဝင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ကျွန် တော်တို့ ကင်းစခန်းငယ်က ရဲအရာရှိတစ်ဦးကျဆုံးခဲ့ပြီး အခြားအဆင့်ငါးဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့ တပ်မ တော်၊ ပြည်သူ့စစ်နှင့်ရပ်ကွက်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူတွေနှင့်လုံခြုံရေး အပြည့်အဝပိုမိုလုပ်ဆောင်ထားပါတယ်” ဟု မူဆယ်မြို့မရဲစခန်းမှူး ဒုရဲမှူးအေးမြင့်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ မေ ၁၂ ရက် နံနက်ပိုင်းက မူဆယ်မြို့တွင်းသို့ TNLA/ KIA ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ကြောင့် ရဲအရာရှိတစ်ဦး တရုတ်နိုင်ငံသားသုံးဦးနှင့် အပြစ်မဲ့ ပြည်သူ ၁၅ ဦးအပါအဝင် ၁၉ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ၂၇ ဦးဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရတနာဆင်များရှင် စေတီတော်ကြီးတွင် ကပ်လှူထားသည့် ကြေးပြားနှင့် ရွှေပြားများ ကျပ်သိန်း ၅၅ဝ ဖြ??
နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကတ်ဖြင့် တရားဝင် သွားလာခွင့် ပြုပြီးနောက် မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ် ‘ရိဒ်’ ဂိတ်မှ ??
ယောဂီဝတ် ဒေါ်နန္ဒမာလာအမှု ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းတင်ပြလျှင် အာမခံပေးမည်ဟုအမိန့်ချ၊ ကျပ်သိန်းငါး?